ကျေးဇူးအများကြီးလာရောက်လည်ပတ်ဘို့လိင်ဂိမ်းများအခမဲ့အွန်လိုင်း–မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာ၊သင်သွားနေတယ်ကြောင်းသဘောပေါက်၏အနာဂတ်ကားဂိမ္းအလွန်ကြီးရရှိနိုင်သင့်ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှာအခုအချိန်မှာ။ ဟိုအအာရုံစူးစိုက်ကျွန်ုပ်တို့၏အဝန်းသည်ကမ္ဘာကိုပြပျော်မွေ့ချင်လျှင်သင်အကြီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ၊အဲဒီနေရာအတိအကျကိုပြုမည်၊ဤအပြင်၌၊သင်သည်လည်းတက်လက်မှတ်ထိုးပေးဆောင်စရာမလိုဘဲတစ်ဦးအပြားဘာမှမများအတွက်။ ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့အချိန်မှကယ်နှုတ်ချို့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ထုတ်ကုန်သို့ဝေး၊ဒါပေမယ့်သင်ထင်လျှင်ကျွန်တော်တို့ယူမယ်တဲ့ကျန်ယခု–သင်အလွန်မှားသည်!, အသင်းမှာလိင်ဂိမ်းများအခမဲ့အွန်လိုင်းပီးသာပဲစတင်ခဲ့တယ်အပေါ်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကနည်းကိုပူဇော်ခြင်းငှါအလိုနှင့်ငါ့ကိုယုံကြည်သောအခါငါပြောသောနေရာတိုင်းသင်ကြည့်ရှု၊သင်ကရှာဖွေဖို့အပြည့်အဝခင်းကျင်း၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အလှန်အပြာကားထုတ်လုပ်သင့်ရဲ့ကြက်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ငါမြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းအဘို့အဆင်သင့်အများကြီးချွတ် jerking၊ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပေါ်အခြေခံပြီးအချက်အလက်များ၊ဂိမ်းကစားကိုအဆက်မပြတ်မှပြန်လာဘို့ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ရေနွေးငွေ့လွှတ်ပေးရေး–အမှုအရာဘယ်တော့မှမအတူတူဖြစ်သွားတစ်ချိန်ကသင်အဘယ်အရာကိုမြင်လိင်ဂိမ်းများအခမဲ့အွန်လိုင်းအားလုံးနှင့်ပတ်သက်။, တာငါအာမခံနိုင်–ဆိုညမ်းစားလိမ့်မည်အတူဒါကြောင့်မင်္ဂလာကိုဦးတည်တယ်ဖြတ်ပြီးလာကြ!
ကြီးသောအမှုတို့ကိုတစ်ခုမှာကြောင်းလိင်ဂိမ်းအွန်လိုင်းအခမဲ့ကျနော်တို့ကပေးအုပ္ဆုိင္အများကြီးအနုပညာလိုင်စင်မှကြွလာသောအခါအမျိုးအစားဂိမ်းသူတို့ဖန်တီးချင်တယ်၊နှင့်ရွေးချယ်စရာများလုံးဝသူတို့အလုပ်နှင့်အတူ။ ဆိုလိုတာကခင်ဗျားသွားရှာဖို့အချို့သောအဂန္အခန်းကဏ္ဍကစားအားကစားပြိုင်ပွဲ၊စိတ်ကူးယဉ်စွန့်စား၊ချိန်းတွေ့ simulators၊ပလက်ဖောင်းခေါင်းစဉ်နှင့်တော့။ အဲဒီတော့ဒီမှာများစွာသောအမျိုးမျိုးနှင့်အတူ ၅၀ ကျော်ဂိမ်းအတွက်ရာင္းခ်ရာမွာ ၁၀၀%သီးသန့်မှကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်း–သင်တော်တော်အများကြီးမှားမသွားနိုင်နှင့်အတူအဖွဲ့ဝင်။, ကျွန်တော်ယုံကြည်ကြောင်း၏အနာဂတ်အွန်လိုင်းညမ်းဂိမ္းအားလုံးလောက်သည်အရေအတွက်နှင့်အရည်အသွေး၊အရာအတိအကျအဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်အကြင်ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှလုပ်တက်ချိတ်နှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကြီးမားဆုံး XXX သောပစ္စည်း၏ရိုးတံမှအချစ်ကနေရသွား။ ဤခေါင်းစဉ်များမှာအားလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပျော်ရွှင်မှုအားလုံးပြီးနောက်၊ဒါပေမယ့်မသွားဘူးကြောင်းစဉ်းစားမယ့်ကစားရန်ပျော်စရာ။ တကယ်တော့၊ကျွန်တော်ယုံကြည်တာအကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဂိမ်းများကြသူများဖြစ်နိုင်ကြောင်း၏အဝတ်ကိုချွတ်အရွယ်ရောက်ပြီးတော့လွှတ်ပေးမခွဲခြားဘဲ–ကောင်းတစ်ဂိမ်းအကောင်းအဘယ်သူမျှမဘယ်လောက်ပဲကြီးၡမ်ားအရေးယူပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်!
ဒါကညာဘက်ခေါင်းစဉ်မှာလိင်ဂိမ်းများအခမဲ့အွန်လိုင်းမဟုတ်ကိုယ့်တစ်ဦး gimmick ဆွဲရန်အတွက်သင်ဒီမှာပါ:ကျနော်တို့ကတကယ်တော့လွမ္းပျော်မွေ့ရန်နိုင်စွမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အဝဂျီဂိမ်း၏လိုအပ်ချက်မပါဘဲသင်တို့အဘို့အဆပ်ဖို့ဘာမှမများအတွက်! အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်သွားရန်ဤလမ်းကြောင်းကိုဆင်း? ရိုးရှင်းသောအကြောင်းပြချက်ကြောင်းယုံကြည်ကြသောကြောင့်အနာဂတ်အရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကစားဖြစ်သွားပတ်ပတ်လည်အခြေအခမဲ့ဖြန့်ချိ။ သူလိုလားဆပ်ဖို့တွေအထိငွေသားရှေ့အဘို့အခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်အစုသောသူတို့အဘယ်သူမျှမသတင်းအချက်အလက်အရည်အသွေးအပေါ်?, ဥပမာကောင်းတစ်ခု၏ကျရှုံးအတွက်ခေတ်သစ်ခေတ်ဤအမှု၌ရှိကြ Cyberpunk ၂၀၇၇ နှင့် OUTRIDERS:နှစ်ဦးစလုံးပြသကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုကြီးမားသောယိုနိုင်ဝယ်လိုအားအများကြီးများအတွက်ငွေကြေးဂိမ်းရိုးရှင်းစွာအဆင်သင့်မဟုတ်။ ကျွန်တော်အထင်အဲဒါဟာအရေးမှဂိမ်းကစားဘို့အအမှန်တကယ်သူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံမျက်နှာသို့ကြောင်းအရာတစ်ခုခုရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့၊ပျော်စရာနှင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့မှတစ်ဦးကိုအချိန်ကြာကြာလာတယ္။ ဤသည်နောက်ဆုံးမှာအဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ရှေ့ဆက်သွားနှင့်သေချာသောအားလုံးအရာ၏လိင်ဂိမ်းများအခမဲ့အွန်လိုင်းရှိပါတယ်ဒီနေရာဖြစ်ပါသည် ၁၀၀%အခမဲ့သင်တို့အဘို့အကြည့်ဖို့၊ကစားနှင့်ပျော်မွေ့။, မရှိသောအင်္ဂါများမှာအနိုင်ရမှပေးဆောင်၊မလုပ်ချင်တံခါးဘာမှနောက်ကွယ်မှအတွက်ပိုက်ဆံမဆိုဖြစ်နိုင်။ ကျွန်တော်ယုံကြည်ကြောင်းကောင်းဂိမ်းပိုက်ဆံဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်မပါဘဲသူတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်လိုအပ်ဤအလှည့်ကွက်၊ကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားင့်တက်ဆောက်လုပ်ဖို့ကြီးမားသောအသိုင်းအတူ-စိတ်တူ XXX ဂိမ်းစွဲချင်သောလက်လှမ်း၏အနာဂတ်အရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကစားအခုဒီမှာ။ အဆင်သင့်ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲနှင့်မြင်အပေါင်းတို့၏အပူ XXX ဂိမ်းကစားခြင်းပျော်စရာကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အ? ကောင်းကောင်းရပါစေသင်တို့အပေါ်မှာအတွက်အရေးယူတော့!
လိင်ဂိမ်းအွန်လိုင်းအခမဲ့တကယ်ကိုအတွန်းအကန့်အသတ်ရှိကောင်းသောဂိမ်းကစားဒီယိုအားလုံးအကြောင်း၊ဒါကြောင့်ကျွန်မအထင်ဟုမပါဘဲဒါဟာဝင်ကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်ဖို့ပိုပြီးလူပေါ်လာဖို့အတွက်နမူနာကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုက္သည္။ သတိရ:ဒါကြောင့်လုံးဝအခမဲ့အဘို့အသင်လာရန်အပေါ်ဒီမှာ၊ဒါကြောင့်ယူလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုနှင့်အဘယ်အရာကိုမြင်ကိုသဘောတူသည်။ သင်သွားမယ့်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့နောက်ကျတာထက်ကျနော်တို့ရရှိပါသည်တစ်ဦးအစွန်းရောက်ပမာဏ၏အခွက်တဆယ်နှင့်အရည်အသွေးဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့ကြက်ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်၊သင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ယူမှုအရာနောက်အဆင့်မှာလိင်ဂိမ်းအွန်လိုင်းအခမဲ့? တက်လက်မှတ်ထိုးခြင်းနှင့်စတင်ရန်အပေါ်အပြာဂိမ္းသက်တာ၏စွန့်စားမှု!